I-Green Skateboarding Basics Xa Uqala Ukuphuma
Midlalo Iingcebiso kunye namaTutorials
I-vert yigama le-skateboarding kwiinqampu ezinkulu zeepayipi, njengokuba ubona kwimincintiswano enkulu ye-skateboarding njenge-X Games. Igama elithi "vert" lifutshane "elona" - ubugcisa bokukhwela i-skateboards kwiindonga ezibonakalayo. Le nto ungayifumana kwii-ramps mini kunye nakwiipaki ezininzi ze-skate! Ukugqithisa izitampu zendalo kunomdlalo omnandi, kodwa uthatha ezinye izinto. Kule nqaku, uya kufunda amanyathelo okuqala okuqala ukukhwela uhlaza.
Okokuqala, kufuneka ufunde indlela yokukhwela nje i-skateboard yakho. Uya kufuna ukufumana izinto ezisisiseko zokuhamba, ukuxubha, ukudweba, njl. Funda i- Just Starting Out Skateboarding kwinqaku , uze uqalise ukukhwela i-skating!
Ukufumana iRamp Ramp kufuphi nawe
Ukufumana iRamp Ramp kufuphi nawe - iSlam City Jam. Ifoto nguJamie O'Clock
Okwesibini, kufuneka ufumane i-ramp green. Ukufumana enye inokuba nzima - konke kuxhomekeke apho uhlala khona. Kukho iindlela ezimbalwa zokuhamba malunga nokufumana umzila wendawo:
Okokuqala, ungacela kwivenkile yakho yendawo yokuzonwabisa. Bamele babe neengcinga ezilungileyo. Kodwa, ngamanye amaxesha akwenzi. Ngoko, kwiimeko ezinje, unokuzijonga ezi zilandelayo:
Abafundi beSikrekthi - aba bantu baye badibanisa uluhlu lwehlabathi lweepaki ze-skateboard ixesha elide ngoku. Iipaki zilinganisiwe, zinezithombe, izikhokelo - zonke izinto. Kwaye, ungasebenzisa inkqubo yabo yefayile ukufumana ipaki oyifunayo. Tsonga nje iipaki ezungeze indawo yakho, kwaye ubone ukuba unokufumana enye nge-rt green.
IiPaki ze-Skate zamahhala-enye iwebhusayithi eneempahla ezininzi ezidweliswe. Ukuba awufumani into oyifunayo kubafundi beZithengi, zinika i-Free Skate Parks ukubukeka.
Ngethemba, phakathi kwezi website kunye nokucela kwiivenkile zendawo zendawo, uya kukwazi ukufumana umzila wendlela okufutshane nawe. Unokugqiba ukuba uqhube iindlela, kwaye uya kuphelisa ukuba uhlawule umrhumo. Yile ndlela le nto isebenza ngayo!
I-Green Ramp Protector Gear
Gqoka iiPads xa Ukhwela i-Green !. Ifoto nguJamie O'Clock
Amagosa aMandla (mhlawumbi, kodwa ingcinga efanelekileyo)
Isigqoko sinokwanela ukukhwela kwidatrato, kodwa kwi-ramp green, ufuna ngokwenene. Uya kuhamba ngokukhawuleza, kwaye ukuwela kwidampu kunokulimaza. Uya kufuna i-elbow kunye namadolo egulo, nayo. Ngokuqinisekileyo abalindi besikrini abayiyo ingcinga embi. Musa ukukhathazeka ngokujongana neziqhwala - uninzi lwama-skaters unxiba uninzi lwendlela yokukhusela kunezobugcisa bezitalato. Ukuba usenakukhathazeka ngazo zonke ezo ndawo, khumbula oku - uya kukhwela kwi-slabs yeenkuni. Ngamanye amaxesha, izilwanyana zisebenza ngokuzikhethela kwaye zikunamathela nje. Ngoku, zicinga ukuba uwele ebhodini lakho, kwaye uguqa ngamadolo akho, kwaye ufumanisa ukuba loo nto ihamba. Ngaba unokuba uguqe idolo lakho, okanye i-cap? Ndicebisa ukuba ukhethe, "pad"!
Slide kwi-Knees yakho kwiRamp Ramp
I-Sliding kwiiKnees zakho kwiRamp Ramp - Shaun White. Ifoto nguJamie O'Clock
Ngoku, unempahla yakho, ibhodi yakho, kwaye ekugqibeleni uhamba kwinqanaba lokukhanya! Mnandi! Inxalenye elandelayo imnandi - ufuna ukufunda ukuwa. Xa u-green skateboarding, uya kuhlulwa, ulahlekelwe ibhodi yakho, ibheyile, okanye into enjalo kwaye ugqibe ukuwa. Ilungile. Kodwa, ufuna ukuqiniseka ukuba uwela ngendlela efanelekileyo .
Ngezo zonke iimpahla zakho, shiya ibhodi yakho ubuye kwi-ramp uze ufumane indawo engabikho mntu ekhwele kuyo. Ngoku, ugijime ngaphesheya kwerampu, gxuma, kunye nomhlaba emadolweni akho. Kufuneka udibanise i-ramp ukuya phakathi, kwaye kufanele ngokwenene ube mnandi. Yenza oku ngamaxesha ambalwa, kwaye ufunde. Xa ugibela i-ramp green and falling, yile ndlela ufuna ukuyenza ngayo.
Ngamanye amaxesha, nangona kunjalo, awukwazi ukukwazi. Uya kuwela kwicala lakho, ngasemva, intloko - nantoni na. Into yokuqala yokuyenza kukuba ungabambeli ngezandla zakho, ngaphandle kokuba ugqoke iilonda zesikhumba. Kodwa, njengokuba ndathi emva nje kokuQala i-Skateboarding, ndincoma kakhulu ukuba ungangeni kumkhwa wokuzibamba ngezandla zakho. Zama uguqa ngamadolo. Kodwa nantoni na eyenzekayo, into ephambili kukuba ukhulule kwaye uvumele ukugqithisa kukudonsa phantsi phakathi kwendlela.
Ukuhlamba phezulu nokuhla kweRamp Ramp
Ukuhlamba i-Down and Down Ramp Ramp - uBob Burnquist. Ifoto nguJamie O'Clock
Ngoku uqala ukuzonwabisa. Thatha ibhodi yakho, uze ufike kwindawo ephantsi kwempambu, ngaphandle komnye umntu okhwela i-skating kufuphi. Ngokuxhomekeka kwindlela ebonakalayo yindawo yokukhwela kuyo, ungase ufune ukubuza malunga nexesha apho kuya kuba ngaphantsi.
Ngoko ke ulapha, emele phantsi kwepambu. I-Hop kwi-skateboard yakho, kwaye uzenze i-push-aim aimed to go one of the walls of the ramp. Guqa ngamadolo. Njengoko uqala ukuziva ulahlekelwa likhawuleza kwicala lempompo, ufuna ukunyuka ngamadolo kwaye ugxininise ekuqhubeni ibhodi phezulu.
Emva kokuba ufike phezulu kwiphini lakho, xa i-skateboard iqalisa ukubuyela emva kwehla kwinqanaba, ufuna ukubeka ubunzima bakho ebhodini, kwaye uphuse phantsi kanzima . Khawucinge nje ngephampoza, kwaye ngokwenene uphoxisa iivili zakho ngelo ramp. Oku kuya kuthatha isenzo, kodwa uya kufumana i-hang it.
Uya kufumana ijubane elikhulu njengoko uvela kwicala ukuya kwelinye icala kwicala. Yenza into efanayo apha, ngasemva nangaphezulu, iya phezulu. Ziqhelise kakhulu, kwaye ungakhathazeki ngokungafundi ngokukhawuleza. Kungekudala uza kufumana indlela ekuqhutyelwa ngayo ukupompoza kwintlambo yendalo. Qhubeka uqhuba!
Xa usuziva ukhululekile, unokuzama ukujikeleza kwiphampu, phezulu kwiphini lakho. Ezinye i-skaters zifumana lula ukuba zihambe, kunokuba ziqhube i-fakie. Kungakhathaliseki indlela efanelekileyo - uya kufuna ukuzisebenzisa zombini ekugqibeleni. Naluphi na osebenza ngokusemandleni akho, phumula, kwaye uhambe!
Ukusebenza Ukuhlahlela. Ifoto nguMichael Andrus
Ukungena kwi-ramp rt is a big deal - kufuneka usebenze indlela yakho ukuya kuyo. Unokulimala kakhulu xa uhamba nje ukuya kwinqanaba kwaye uzama ukuyeka, ngaphandle kokusebenza kuyo.
Okokuqala, ufuna ukufumana ukuzithemba kunye nekhono ngokuyeka iinqanaba ezincinci. Enye indawo ebalulekileyo yokufunda ukuhla e-park skate. Funda indlela ongena ngayo kwi-Ramp okanye kwi-Skatepark , kwaye ufumane umbhobho omncinane wekota, i-mini-ramp, udonga oluncinane lwe-skatepark-into enje ukuyenza. Kukulungele okokuqala ukufumana ikrampu enendawo esicacileyo esicacileyo phambi kwayo, ukuze ukwazi ukukhupha isivinini sakho.
Xa unesiqinisekiso kwizinto ezincinci, uya kuba ulungele ukusebenza kwindlela eya phezulu. Zama ukuhla e-ramps ezinkulu, funda ukuwa kweyona ndawo enkulu kwi skatepark yakho, izinto ezinjalo. Thatha ixesha lakho kunye naloo nto - phumula, kwaye ungayigxumi. Yenza ikholo lakho ngokwakho, kwaye qiniseka ukuba uyonwabile!
Xa uziva unentembelo ngokwaneleyo, unokwenza ulunge kwi-ramp yangempela ...
Ukungena kwiRamp Ramps
Ukungena kwiRamp Ramps - uPeter Luc Gagnon. Ifoto nguJamie O'Clock
Ukulahla kwimibukiso eyoyikisayo, kwaye kunjalo, kodwa akunzima njengoko ibukeka. Uninzi lomsebenzi kukukholelwa ukuba unokukwenza!
Khuphukela phezulu kwinqampu yentsimbi, kwaye usethe umsila webhodi yakho yebhodibhodi.
Ngoku, xa ummandla oya kujongela kuwo ucacile kwezinye i-skaters, ufuna ukuthabatha, ukuphefumula, kunye nokuphumla. Beka inyawo lakho ngaphambili ngaphaya kweelori zakho zangaphambili, kwaye uyiguqule phantsi ngamandla akho onke de ivili lakho langaphambili libethe. Ufuna ukusibetha nzima, kwaye ungaxhomeki emva! Kholelwa ukuba kuya kusebenza, kwaye ungabambeli - awukwazi ukubamba !! Ukuba wenza, uya kuphazamiseka kwaye utshise. Beka konke ubunzima bakho kuyo, gxuma amaloli angaphambili, kwaye ugibele phantsi! Le nto yinto eyoyikisayo, kodwa ungakhathazeki ngayo. Yiya nje.
Uninzi lwe-skateboarding ingqondo. Njengomhlobo wam omhle wayethetha ukuba, ukukhwabanisa kuphezulu entloko yakho. Kufuneka uphumule, kwaye ukholelwe ukuba unokukwenza. Ukuba ungayifumana loo nto, ezinye zilula!
Emva kokuba ufike ngesivinini phantsi kwendlela ongayiguqula ngayo ubunzima bakho ngendlela efanayo oyenzayo xa uphakamisa i-ramp. Uhlala ufuna ubunzima bakho enyawo oya kuwo. Ngoko ke, ukuba ugibela isantya sakho emva kokungena, vele ukhulule kwaye ugcine ubunzima bakho kwinqanaba langaphambili. Hlala kuyo. Emva koko, xa ukhwela ngaphesheya uze ufike phezulu kwinqanaba lakho ekuhambeni kwakho, tshintsha isisindo sakho kwelinye inyawo, uphinde uhlawule ngaphesheya kwinqanaba. Yenza oku ngasemva nangaphandle. Ukuba ufuna ukuqhubeka, unokupompoza ngesantya, nje ngeyinqanaba elingu-5!
Ramps Green - Phuma kwaye uhambe
Ramps Green - Phuma kwaye uhambe. Ifoto nguJamie O'Clock
Zonke ezinye iingubo ze-skating zihamba ngokukhululekile, kwaye zifunda ukukhwela apho ufuna ukuya khona. Ngoku phumani apho kwaye ugibe loo ndlela!
Ukuba unenkathazo, zama ukucela uncedo kubantu abagijimela irampu okanye ezinye i-skaters ezingaba zijikeleze. Ekubeni iindawo ezininzi zendalo zifuna umrhumo othile wokusetyenziswa, kufuneka kubekho abantu abakujikelezayo abanokukunika iingcebiso ezilula, ukuba ufuna.
Mhlawumbi ufuna ukuqala ukufunda amaqhinga, xa uziva ukhululekile kwi-ramp green. Idwala ukuya kwiFakie , okanye iDwala kunye neRock, i-Axle Stall, kwaye ukuphuma kwamanye amaqhinga amakhulu ukuzama, xa uziva ulungele. Ngokugqithiseleyo, vula, ujabule, kwaye ujabulele ukukhwela!
I-New Skateboarders Guide
Njani u-Ollie kwi Skateboard
Indlela yokucoca ii-Skateboard Bearings
Indlela yePop Shuvit kwi-Skateboard
Indlela yebhodidididi - Iingcebiso zobuqhetseba nge-Skateboarding
Indlela yokulwa noyiko lwe-Skateboarding
Imifanekiso yesiJamani ejikeleze i-Easter: Igama elithi Mein nguHase
Ingemvelaphi ekubulaweni kweHarambe
2002 IWWE PPV Iziphumo - Unyaka WWF Uguqule Igama Labo
Isingeniso kwiGragram yeGrama
Amazwi Okugqibela aMaKhosi, amaQueens, aBalawuli kunye neNdawo zeMveli
Izinto Ezingazange Ziyazi NgeSistine Chapel
Amanzi aseKhitek Kayak
Ukudoba iRodo yokuThengisa iziseko
Ziziphi iingqungquthela? Isingeniso
Indlela yokukhumbula imihla yoVavanyo - ukukhunjulwa